Hiirshabele oo ka hadashay dilkii taliyaha qeybta Booliska gobolka Hiiraan – Radio Daljir
Hiirshabele oo ka hadashay dilkii taliyaha qeybta Booliska gobolka Hiiraan
Juunyo 12, 2019 2:07 g 0
Kusimaha Madaxweynaha Hirshabelle ahna Madaxweyne ku xigeen Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa ka hadlay dhacdadii shalay lagu dilay taliyihii qeybta Booliska gobolka Hiiraan Maxamed Mocow Xalane.
Cali Guudlaawe Xuseen ku simaha Madaxweynaha Hirshabeellle ayaa isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu ugu baaqay shacabka Hirshabelle inay is dejiyaan ammaankana lagu dadaalo.
“Cid kasta oo qeyb ka ah dilkii taliyihii qeybta gobolka Hiiraan Maxamed Mocow Xalane ha noqoto cidii dishay,cidii soo dirtay iyo cid kasta oo kiiska lugta la galaba sharciga ayaa la horkeeni doonaa waxaan baaritaan wadajir ah ku sameyn doona maamulka Hirshabelle iyo dowlada federalka.”ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Dhinaca kale Madaxweyne kixigeenka Hirshabeelle, Cali Guudlaawe xuseen ayaa ka tacsiyeeyay ehelada iyo dhamaan umadda reer Hirshabeelle, geerida marxuum Maxamed Macow Xalane isaga oo u rajeeyay caafimaad taam ah taliye ku xigeenkii saldhigga booliska Beledweyne.
Sidee ku Biloowday Khilaafka Xudduudda Badda ee Kenya iyo Soomaaliya?
Madaxweyne ku xigeenka Puntland muxuu kala hadlay Ciidamada Af-urur (Daawo)